Maxaa loo xallin la’yahay colaada xaafada Tukaraq? - Caasimada Online
Home Warar Maxaa loo xallin la’yahay colaada xaafada Tukaraq?
Maxaa loo xallin la’yahay colaada xaafada Tukaraq?
Tukaraq (Caasimada Online) – Deegaanka Tukaraq oo katirsan gobalka Sool waxaa wada maamula Puntland iyo Somaliland , waxaana deegaanka Tukaraq in Muddo ah ku dagaalamaya Ciidamada laba dhinac kuwaa oo sidoo kale isku hub aruursanaya islamarkaana xili walba dagaal diyaar u ah.
Tan iyo markii dib u soo cusboonaaday dagaalka labada dhinac waxaa ka dhashay khasaaro naf iyo maalbo leh oo soo kala gaaray ciidamada Puntland iyo Somaliland waxaana meesha ka marneyn dadka shacabka ah ee lagu kor dagaalamay.
Waxaa jirtay waa waan nabadeed oo ay garwadeen ka aheyd Beesha Caalamka balse la ogyahay in colaadii sii xumaatay iyadoo la xasuusti Markii danjirha Qaramada Midoobay u fadhiya Soomaaliya Ambassador Micheal Keating uu la kulmay Madaxda Labada Maamul inuu dagaalka dib u bilowday.
Sababaha ugu weyn ee colaada loo xalin la’yahay ayaa ah in aysan is hor fariisan madaxda labada maamul oo la ogyahay in natiijooyin wanaagsan ay ka soo bixi la haayeen hadii Madaxwyenaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo Madaxweynaha Puntland Cabdi Weli Maxamed Cali Gaas ay kulan gaar ah ka yeelan la haayeen dagaalka ka dhex aloosan, gaar ahaan muran dhuleedka u dhaxeeya.
Dagaalka Tukaraq waxaa sidoo kale in xal laga gaaro ku hor gudban hadalada ka soo yeera Mas’uuiyiinta kala duwan ee Puntland iyo Somaliland gaar ahaan saraakiisha iyo Madaxda Ciidanka oo sii hurinaya colaada Tukaraq.
Aamusnaanta culumada Soomaaliyeed oo iyagu lagu yaqiinay iney calanka Nabadda u dooraan dhincyada dagaalama ayaan weli ka hadlin dagaalka Tukaraq.
In La soo afjaro dagaal u dhaxeeye laba maamul wey fududahay hadii loo tanaasulo nabadda iyo wada noolaashaha.